गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहलाई चार अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:३४
गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले बिभिन्न शीर्षकमा चार अर्ब ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । आगामि आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ का लागि वित्तीय समानिकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान गरी पालिकाहरुलाई सो रकम विनियोजन गरेको हो ।
गोरखा नगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । समानिकरणतर्फ २२ करोड ८१ लाख, सशर्ततर्फ ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी पालुङटार नगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले ४९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । समानिकरणतर्फ १७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी सिरानचोक गाउँपालिकाका लागि ४० करोड ८७ लाख बिनियोजन गरेको छ । वित्तीय समानिकरणतर्फ १३ करोड ५१ लाख, शसर्ततर्फ २७ करोड ३६ लाख बिनियोजन गरेको हो । त्यस्तै अजीरकोट गाउँपालिकालाई २७ करोड ७५ लाख बिनियोजन गरेको छ । समानिकरणतर्फ १० करोड ७४ लाख, सशर्ततर्फ १५ करोड ६५ लाख र समपुरकतर्फ एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो । त्यस्तै बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले ४९ करोड ७६ लाख बिनियोजन गरेको छ । समनिकरणतर्फ ७२ करोड ७५ लाख, सशर्ततर्फ २२ करोड ९३ लाख, विशेष अनुदानमा एक करोड र समपुरक अनुदानमा दुई करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो ।
त्यस्तै गरी धार्चे गाउँपालिकामा कूल २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । समानिकरणतर्फ नौ करोड चार लाख, सशर्ततर्फ १२ करोड ३१ लाख, विशेष अनुदानमा ५० लाख र समपुरकतर्फ दुई करोड ४० लाख बिनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी चुमनुब्री गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । समानिकरणतर्फ छ करोड ८७ लाख, सशर्ततर्फ १२ करोड तीनलाख, र विशेष अनुदानतर्फ ५० लाख बिनियोजन गरेको छ ।
आरुघाट गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । समानिकरणतर्फ १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सशर्ततर्फ २० करोड ३७ लाख र समपुरकतर्फ एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै भीमसेन गाउँपालिकाका लागि ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । समानिकरणतर्फ १३ करोड १९ लाख, सशर्ततर्फ २२ करोड ६३ लाख बिनियोजन गरेको छ । शहीद लखन गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारबाट ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । समानिकरणतर्फ १४ करोड ७६ लाख, सशर्तमा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो ।
त्यस्तै गण्डकी गाउँपालिकाका लागि ३९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । जसमध्य समानिकरणतर्फ १३ करोड ४१ लाख, सशर्ततर्फ २४ करोड २३ लाख र समपुरकतर्फ एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।